Spring usebenza kuleli zwe - engathí sina.
Spring - isikhathi hot, Ziningi ukuba ngesikhathi, futhi inkantolo ukuze alethe, futhi wokumba kudingekile ukuba banake. Sekuyisikhathi sokuba wensimu iyona ezibucayi kakhulu futhi kuthatha isikhathi.
Sebenza kuleli zwe, mhlawumbe kufanele uqale ekuhlanzeni indawo, njengoba kubekiwe oda komhlaba, kulula kakhulu futhi ikhefu mnandi ngokwengeziwe zilawulwe izimboni. Ukuhlala kusukela ngonyaka odlule, iziqu ezomile izitshalo, amagatsha ezomile nge derevev- konke lokhu kumele ilahlwe, umlotha ukuthi ahlale ngemva kokuvuna indawo, kungaba wamukelekile kakhulu futhi ngokushesha uthatha isinyathelo. Uthuli ifenisha engadini futhi idinga ukunakwa uqobo, kufanele ahlanze futhi msulwa ukungcoliswa atholwe ebusika. Zokugcina kusayithi uzodinga futhi ukuhlanza, ukugeza ingilazi, ukuze kungene ukukhanya badabula kubo kangcono, futhi ususe doti ngokweqile ebese umba umhlabathi ngenxa isitshalo entsha.
Imbali engadini - ukuziqhenya umhlali ehlobo wensimu, futhi amnakekele, ngezinye izikhathi, kuthatha share kahle isikhathi esabelwe entwasahlobo umsebenzi kuleli zwe. Ngezinye izikhathi, ngisho iqhwa is hhayi elicibilikile ngokuphelele, futhi imibhede kakade egcwele snowdrops, hyacinths kanye nezinye izimbali ekuseni. Uma lezi imibala ziyatholakala ezindaweni, yokuhlanza flower embhedeni iwukuba sibaqaphelisise ilimaze amahlumela noma izitshalo abonisa ukungavuthwa. Kuyacaca ukuthi ukumba up umhlaba Kulezo zimo akudingekile, kodwa ukukhulisa umhlaba ubisi, musa ubuhlungu. Uma inhlabathi ohlangene, ngesikhathi ziba ngcono yayo kungenziwa ahlakazekile embhedeni humus ngaphambili abalufundile noma Peat. Ezweni okulungiselelwe kungenziwa itshalwe imbewu nezithombo.
Manje siya Shrub Ukunakekela. Spring imisebenzi kuleli zwe - kuyindaba engathí sina futhi kudinga indlela efanayo kuyo yonke into. Ukunikeza isivuno esihle ama-raspberry, mhlawumbe obkopat futhi umquba zonke ehlathini. Ukuze umquba, ungasebenzisa inkukhu umquba, exutshwe namanzi futhi esemi laphaya isikhashana. Lokhu kudingeka amanzi ukuze uthele okusajingijolo ezihlabayo. Ukuze ama-raspberry kwaba wormy kancane, kungenziwa itshalwe phakathi sezihlahla udali, le ndlela isebenza iqiniso lokuthi izinambuzane kanye izinambuzane abakwazi ukubekezelela iphunga okuyinto exudes udali.
Earthworks at-cottage uqale ulima (uma kuvunyelwe indawo) komhlaba, noma okunye yokumba wakhe. Okulandelayo ekwelapheni emhlabeni bemba raking futhi atshale imbewu noma izithombo. Izaqathe, beet, amazambane, uphizi, ubhontshisi, u-anyanisi, amahlumela chesnok- angakasitjali. Futhi ezifana izitshalo ezifana utamatisi, pepper, iklabishi, ukhukhamba kungenziwa itshalwe ku ekhanyayo kakade ngesimo izithombo.
Ngaphambi kokuba atshale yimuphi kwezitshalo, kuyinto efiselekayo zalisa ezweni. Esikhathini kusuka April kuya ku-May, balimi Ziningi umsebenzi kuleli zwe, futhi ikakhulukazi ngoMeyi, kodwa leso sikhathi ukuze alungiselele inhlabathi for kokuhlwanyela kubalulekile ukuthola, incike izinga isivuno kanye nobungako. Ukuze sondle inhlabathi ngokusebenzisa Peat, umquba, umquba noma sawdust zihlukahlukene, kodwa le sawdust kungenzeka ukuvela izinambuzane emhlabathini, yebo, lokhu inkinga kalula ixazululwe ngosizo amathuluzi ahlukahlukene asetshenziselwa nezinambuzane eziwuhlupho.
Elinye iphuzu okufanele sicabange ngazo lapho atshale emhlabathini - kuyinto elikhuluma ngesidingo sokugcina alternations e posadkah.Zemlyanye entwasahlobo umsebenzi kuleli zwe abazenzi ukuze ezindaweni ezithile umhlaba unyaka ngamunye elandelayo lawela namasiko ehlukene. Uma kulo nyaka ku isiqephu sezwe rose ukhukhamba ke olandelayo it has sikhule, isibonelo, u-beetroot. isitshalo ngasinye udonsa kusuka ezweni lalabo izakhi mkhondo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi lesi sitshalo liye landa, futhi uma itshalwe ngonyaka ezindaweni ezifanayo zalesi sihlahla efanayo, khona-ke umhlaba Ukuwohloka. Yiqiniso, uma endaweni eyabelwe engadini, hhayi incane kakhulu, futhi babe nethuba ukunikeza ezweni lonke, kuyinto efiselekayo ukwaba ingxenye encane ngonyaka ukuze umhlaba ngokuphelele. wakhululeka lokutshala ka. Emkhakheni wezolimo ubizwa ngokuthi "pair".
Akubuzwa, umsebenzi kule hvataetyu ezweni ngoMeyi. Spring usebenza kuleli zwe - ngokuvamile ukukhathazeka okuqhubekayo, kodwa kunalokho emibhalweni yakhe sithola isitshalo ukuthi kuyoba uyabukeka emehlweni futhi esiswini kulo lonke ekwindla nasebusika isikhathi. Stern, for balimi abaningi sisebenze ezweni - kuba into efana occupational therapy.
Izingadi Kuqondile (isithombe). Indlela yokwenza ingadi mpo ngezandla zakhe?
Igumbi Imbali pachystachys: ukunakekelwa ekhaya
Inxanxathela "Buk M2": ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe
Ezinye izindlela, indlela ukupheka compote cherry
Gel matte sula. Izinketho nail design
Indlela ukubhala kahle: owesilisa noma ikhebula?
Yikuphi ukukhetha lokubuka diving?
Ibhizinisi manicure (ehhovisi manicure) - imibono kanye nezithombe
Ekolishi IsiFulentshi MSU: Izibuyekezo
Fire Dragon - isici uphawu
Stendhal "Charterhouse of Parma": isifinyezo